KENKAN WƆ Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Attié Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Guarani Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tlapanec Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Bible se: “Kyerɛwnsɛm no nyinaa fi Onyankopɔn honhom mu.” (2 Timoteo 3:16) Sɛ saa na ɛte a, ɛnde Bible betumi akyerɛ wo kwan ma asi wo yiye.
Wo deɛ hwɛ asɛm yi: David reka kar nanso baabi a ɔnenam seesei no, onhu so koraa. Ɔhwɛ adan ne nneɛma a ɛwowɔ kwan ho a, ohu sɛ wayera. Ɛbɛyɛ sɛ oduu nkwanta bi so no, kwan no bɔ faa n’ani so.
Wone David a, anka wobɛyɛ dɛn?
Nneɛma mmiɛnsa bi wɔ hɔ a wubetumi ayɛ:
Hwɛ map anaa nea wɔfrɛ no GPS so.
Kɔ w’anim; ebia wugu so rekɔ no wubehu kwan.
Wohwɛ mu paa a, wuhu sɛ nea ɛtɔ so mmiɛnsa no mmoa.
Nea ɛtɔ so mmienu no ye sen nea edi kan no, efisɛ map anaa GPS deɛ, ɛka wo ho daa. Enti worekɔ nyinaa wubetumi ahwɛ ma akyerɛ wo kwan.
Saa ara na Bible te.
Bible yɛ nhoma a abu so baabiara, na ebetumi aboa wo akwan pii so:
Wuhyia asetena mu haw bi a, ebetumi atwitwa agye wo.
Ebetumi ama wo ara woahu sɛnea wote ne nsakrae a ɛsɛ sɛ woyɛ.
Ɛbɛma woahu nea woyɛ a ebesi wo yiye.
BAABI A WUBENYA NSƐMMISA AKƐSE HO MMUAE
Yehuu kasa ara pɛ na yɛafi ase rebisa nsɛm bi te sɛ,
Adɛn nti na ewim yɛ bruu?
Ɛdɛn na wɔde yɛɛ nsoromma?
Yegu so renyin no, yehu nneɛma bebree na wei de nsɛmmisa pii ba.
Adɛn nti na nneɛma bɔne sisi?
Yɛka sɛ Bible ama nsɛmmisa yi ho mmuae dedaw a, wubegye adi?
Nnipa pii ka sɛ Bible deɛ, anansesɛm nko ara. Ebi nso se atwam anaa wokan a, wonte ase. Nanso Bible no na asɛm wɔ ho anaasɛ adwene a nkurɔfo wɔ wɔ Bible ho ne asɛm no?
Nkurɔfo adwene yɛ wɔn sɛ Bible ka sɛ Onyankopɔn na odi wiase so. Wohwɛ a ɛtɔ asom? Wiase yi agye nsam koraa! Ɔhaw ahyɛ mu ma. Ɛnyɛ yawdi a, na ɛyɛ amanehunu; ɛnyɛ yare a, na ɛyɛ owu; ɛnyɛ ohia a, na ɛyɛ atoyerɛnkyɛm. Ɛbɛyɛ dɛn na mmɔborɔhunu Agya Nyankopɔn de saa nneɛma yi aba wiase?
Wopɛ mmuae no? Bible ma yehu nea odi wiase so; ebia nokwasɛm yi bɛyɛ wo nwonwa!
Sɛ wohyɛɛ no nsow a, afotu a ɛwɔ nhoma yi mu nyinaa gyina Bible so. Yehowa Adansefo gye di paa sɛ yɛrentumi nkwati Bible nnya anigye da. Efisɛ Bible fi “Onyankopɔn honhom mu, na eye ma ɔkyerɛkyerɛ, ntɛnyi, nneɛma ateɛteɛ.” (2 Timoteo 3:16, 17) Ebesi ha yi, ɛdɛn na wobɛyɛ? Ampa, Bible yɛ tete nhoma, nanso ne bere ntwaam. Enti gye bere yɛ nhwehwɛmu na wubehu paa sɛ ɛso wɔ mfaso!
Hwɛ video a wɔato din Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Wusua Bible? wɔ www.jw.org/tw.
Adɛn Nti na Ɛho Hia sɛ Wosua Bible?
Woaka sɛ, ‘Menni adagyew koraa,’ anaa ‘Merentumi nhyɛ bɔ’ pɛn?
Bible—Nhoma a Efi Onyankopɔn Hɔ (Ɔfã 1)